नेपालमै बन्छ रु. ३० लाख पर्ने विश्वको चर्चित र महँगो घडी, नेपालमा खोलेको कारखाना विश्वमै पहिलो ! – Sandes Post
April 27, 2022 263
उक्त कम्पनीको वेव साइटका अनुसार हिमालय एभरेष्ट (HIMALAYA EVEREST EDITION II) एडिसन दुईको मुल्य हो ३० लाख । त्यो भन्दा अर्को पनि छ एउटै घडीको १६ लाख ५० हजार मूल्य पर्ने ‘कोबोल्ड वाच’ नेपालमै बन्ने गरेको महंगो मूल्यमा निर्यात हुने पनि तथ्य खुलेको हो ।
Prevनौ महिनामा तीन अर्ब ३० करोडको सारी तथा धोती भित्रियो, कहाँबाट आउँछ सारी तथा धोती नेपालमा ?
Nextजेठ १ गते देखि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा